Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Zvitima zveParis neNice zvakabatana neyekukurumidza uye inoshanda nzira yechitima saka kushanyira matunhu maviri kamwechete hakuna kumbobvira kwakaita nyore. Izvi zviviri zvakasiyana kumatunhu zvinokwezva zviuru zvevashanyi gore negore. Nhema dzakanaka pamoyo peiyo inoshamisa French Riviera mu…
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Germany ine makomo makuru, kufema-kutora kumaruwa, uye cosmopolitan maguta izvo kuti chitima kufamba ikoko ainakidza ruzivo. Kune nzvimbo dzakawanda dzinoyevedza kuona kusanganisira Berlin, Munich, Hamburg, Cologne, uye Frankfurt, nevamwe vazhinji. hotspots izvi uye maguta maduku zvose interconnected patsime-vakarongeka mhoro-nokukurumidza chitima hurongwa. ichi…
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Venice ndomumwe kupfuura unokurudzira uye zvemashiripiti maguta muItaly uye zviri nyore nechitima. By kushanyira Venice panguva Easter mazororo, unogona kunakidzwa inofadza chitubu ekunze. Izvi zvinobvumira kuti kupedza zuva rose panze. Kufamba kunhoroondo nzvimbo…
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi Ona uye kuona zvakawanda nokutanga on European muchitima ushingi. Achifamba nechitima mu Europe ndiyo nzira quintessential kuti achishanyira mishoni Europe hachizi chakavanzika nei. Iyo njanji network yakasimukira zvakanyanya kuti vafambi vakunde nyika dzakawanda netsika…
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Interrailing Mazano uye rwendo bhajeti zvinogoneka kana waronga rwendo yako nokungwarira. Mutengo wematikiti ezvitima, pokugara, chikafu, uye varaidzo zvinosiyana pakati nyika muEurope, asi kune nzira dzakawanda dzekunakidzwa nerwendo rwemutengo wakaderera. Luckily, vamwe gadziriro, njanji pakufamba…
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Ungave ndave ndakaroorwa kwemakore, kana vachiri mukutanga maitikiro ane ukama, ose Vaviri vangabatsirwa yepamusoro nguva pamwe chete. Zviri kunyanya akanaka kuedza kuti Day Valentine. Vatariri nechitima ndiyo nzira yakakwana kutanga…
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi Vatariri kumativi Europe rails chinhu dzakaita makore dzichipiwa tsika kuti haasi kuenda kukurumidza – Zvitima ndivo uchitsanya, yakanyanya eco-hushamwari, uye nzira inoshanda kwazvo yekufamba kubva panzvimbo kuenda pane imwe nzvimbo. Kunyangwe yedu tikiti tikiti system inobvisa marwadzo kunze kwekuronga…